Kooxda Napoli oo dhagaha ka fureysatay dalabyada u imaanayo daafaceeda u dhashay dalka Spain Albiol | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Kooxda Napoli oo dhagaha ka fureysatay dalabyada u imaanayo daafaceeda u dhashay dalka Spain Albiol
Kooxda Napoli oo dhagaha ka fureysatay dalabyada u imaanayo daafaceeda u dhashay dalka Spain Albiol
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 9-06-16 1:51 PM Kooxda Napoli ayaanan diyaar u aheyn iney iska iibiso rug cadaaga daafaca ka ciyaara ee u dhashay dalka Spain Raul Albiol xagaagan sida lagu qoray maanta qaar kamid ah wargeysyada Talyaaniga.
Waxaa la aminsan yahay in 30 Sano jirkan uu xur noqon doona xagaaga dambe isaga oo awood u yeelanaya marka la gaaro June 2017 ka inuu si bilaash ah ugu biiro kooxda uu doono, waxaa soo baxayo warar sheegayo in xidigan uu ka biyo diiday inuu qandaraas cusub u saxiixo kooxdiisa.
Kooxda ka dhisan gegida Mastella Stadium e Valencia ayaa lala xiriirinayey daaficii hore ee kooxda Real Madrid iney la saxiixan doonaan, balse Manuel Garcia oo ah wakiilka Raul Albiol ayaa ka dhawaajiyey inuusan diyaar u aheyn in xidigan uu ka hayaamo dalka Talyaaniga waqti xaadirkan.
“Napoli ma dooneyso iney iska iibiso Raul, kooxaha doonayo dhamaan ha maqlaan waxa aan dhahayo” Garcia ayaa sidaas warbaahinta u sheegay.
Ugu dambeyn waxa xusid mudan in daaficii hore ee xulka dalka Spain iyo kooxda Real Madrid uu kasoo muuqday kooxda Napoli 51 jeer, waxaa sidoo kale doonayo adeega daafacan kooxo ay kamid yihiin Getafe iyo Valencia.